कोरोना संक्रमित १ करोड पुग्नलाग्दा अक्सिजन दिने मेसिन अभाव’ - News25 Daily
June 25, 2020 adminLeaveaComment on कोरोना संक्रमित १ करोड पुग्नलाग्दा अक्सिजन दिने मेसिन अभाव’
असार, काठमाडौं । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)ले विश्वभर कोरोना संक्रमित व्यक्तिहरुको संख्या एक करोड पुग्नैलाग्दा अक्सिजन दिने मेसिन अभाव भएको जनाएको छ ।डब्ल्यूएचओका महानिर्देशक टेड्रोसले पत्रकार भेटघाटमा भने, ‘धेरै देश अक्सिजन कन्स्नट्रेटर (मेसिन)को अभावसँग जुधिरहेका छन् । हाल यो मेसिनको माग बढी भएको छ ।’
उनले भने, अहिलेसम्म विश्वमा ९३ लाख जना कोरोना भाइरस संक्रमित भइसकेका छन् । ४.८० लाख जनाको ज्यान गइसकेको छ । हरेक हप्ता १० लाख नयाँ संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ । यसका कारण हरेक दिन ८८ हजार ठूला अक्सिजन सिलिण्डर र ६.२० लाख क्युबिक मिटर अक्सिजनको आवश्यकता परिरहेको छ ।
संक्रमितहरु अचानक वृद्धि भएका कारण अक्सिजन कन्स्ट्रेटर अभाव भएको छ, जुन कोरोना संक्रमित बिरामीलाई सास लिनका लागि आवश्यक पर्दछ । टेड्रोसले भने, ‘डब्ल्यूएचओले हालसम्म १४ हजार अक्सिजन कन्स्नट्रेटर खरिद गरेको छ र आगामी हप्ता १२० देशमा पठाउने योजना छ । यसका साथै आगामी ६ महिनामा १.७० कन्स्नट्रेटर प्राप्त हुनेछ, जसको मूल्य १० करोड डलर छ ।’
डब्ल्यूएचओको आपतकालीन टिमका प्रमुख डा. माइक रियानका अनुसार धेरै ल्याटिन अमेरिकी देशमा महामारी फैलिएको छ । यस क्षेत्रमा मृत्यु हुनेको संख्या एक लाखभन्दा बढी पुगिसकेको छ । कतिपय देशहरुमा पछिल्लो हप्ता २५ देखि ५० प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको छ । माइकका अनुसार अमेरिकामा अझै कोरोना संक्रमण उच्च विन्दुमा पुगिसकेको छैन । आगामी दिनमा पनि संक्रमित हुने र मृत्यु हुने व्यक्तिको संख्या बढ्ने सम्भावना छ ।
अमेरिकालाई उत्तर कोरियाको चेतावनी : हाम्रो मामिलामा नबोल, नत्र स्थिति खराब हुन्छ !
तीन चरणमा लकडाउन खुकुलो पार्ने सरकारको निर्णय, बिहीबारदेखि के-के खुल्न पाउने?